မိဘတွေ အလွန် အမေးများတဲ့ ကလေး ချွဲကျပ်နေလို့ ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ကလေးနှာခေါင်းပိတ်နေလို့ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုသူများအတွက်… ⋆ The Ginger Media
မိဘတွေ အလွန် အမေးများတဲ့ ကလေး ချွဲကျပ်နေလို့ ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ကလေးနှာခေါင်းပိတ်နေလို့ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုသူများအတွက်…
မိဘတွေ အလွန် အမေးများတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေပါ။ အခြေခံမှ စပြီး ရှင်းပြလိုပါတယ်။ (၁) နှာခေါင်း သို့မဟုတ် လည်ချောင်းထဲက ချွဲသလိပ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
နှာခေါင်း, လည်ချောင်း, အသက်ရှူပြွန်ထဲမှာ အမြဲ စိုစွတ်နေအောင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝ အရည်အိတ်လေးတွေက သန့်ရှင်းတဲ့ အရည်တစ်မျိုး အမြဲထုတ်ပေးပါတယ်။
စက်ရုံ, ကား, ဆေးလိပ်နဲ့ အခြားလောင်စာမှ ထွက်သော မီးခိုးငွေ့များ, ဖုန်များ, အန္တရာယ်မကြီးသော virus ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးမွှားလေးများနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားများက
နှာခေါင်းမှတဆင့် လည်ချောင်းနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲ ဝင်ရောက်လာသောအခါ ခန္ဓာကိုယ်က ထုတ်နေကျ အရည်ကြည်ကို တိုးထုတ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုဆေးကြောပေးချင်လို့ပါ။
ကိုယ်ခံအားလို့ အမြဲပြောတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက သွေးဖြူဥလေးများက နှာခေါင်းလည်ချောင်းထဲ ရန်သူဝင်လာတာနဲ့ စတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ရန်သူဘက်က ပိုးမွှားများရော သွေးဖြူဥများရော အတုံးအရုံး သေဆုံးကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ဝင်လာတဲ့ ဖုန်, မီးခိုးငွေ့, ပိုးမွှားအသေများ, ကျဆုံးသွားသော သွေးဖြူဥလေးများဟာ တိုးထုတ်ထားသော အရည်ကြည်နဲ့ ပေါင်းစည်းပြီး ချွဲသလိပ်အနေနဲ့ ထွက်လာပါတယ်။
(၂) ချွဲသလိပ် မထွက်အောင် ကာကွယ်ဖို့က ဘာအရေးကြီးလဲ။ ။ ပတ်ဝန်းကျင်လေထု သန့်ရှင်းရေးနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးပါ။ လူကြီးများ ချောင်းဆိုးနှာချေလျှင် တစ်ရှူးနှင့်ကာပါ။ ကလေးကို မကိုင်တွယ်ခင် လက်မှန်မှန်ဆေးပါ။ ကလေး ပတ်ဝန်းကျင် မီးခိုးငွေ့ကင်းဝေးပါစေ။
(၃) ကလေးငယ်များ ချွဲကျပ်ခဲ့သော်။ ။ ဆား လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်းကို ဆူအောင်တည်ထားသော ရေနွေး ၅၀၀ ml နှင့်ရောပြီး အအေးခံပြီးလျှင် နှာခေါင်းပေါက်များထဲ ၁စက် ၂စက်စီ ၂-၃ နာရီခြားထည့်ပေးလို့ရပါသည်။
ရေနွေးနွေးနှင့် ရေမကြာခဏ ချိုးပေးခြင်း။ ။ ကလေးငယ် အိပ်သော အနီးအနားတွင် ရေနွေးဇလုံ ချထားခြင်းဖြင့် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ချွဲပျော်နိုင်စေပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံကြီးများမှာ ရေနွေးငွေ့ ထုတ်ပေးသော စက်သေးသေးကလေးများကို ချွဲကျပ်သောကလေးများအတွက် သုံးရန်ထုတ်ပါသည်။
ကလေးကြီးများ ချွဲကျပ်ခဲ့သော် ရေနွေး မကြာခဏ သောက်ခြင်း, ဆားရည်နှင့် ပလုပ်ကျင်းခြင်းဖြင့် ချွဲ ပျော်နိုင်စေနိုင်ပါမည်။ နှာခေါင်းပိတ် ချွဲကျပ်ခြင်း ၄ ပတ်ကျော်လျှင် အဖျား ၁၀၂ ထက်ကြီးလျှင်, နားပြည်ယိုလျှင်, အသက်ရှူ အလွန်မြန်လျှင်, အစာမစားလျှင် ဆရာဝန်နှင့်ပြပါ။
မွေးရာပါ အဆုတ်လေပြွန်များရောဂါရှိလျှင် ချွဲပိတ်ဆိုးလွန်းသည်။ ကိုယ်အလေးချိန် ကျသည်။ ကလေးအထူးကုနှင့် အချိန်မီ ပြဖို့လိုသည်။ အလွန်ရှားပါသည်။
မိဘတှေ အလှနျ အမေးမြားတဲ့ မေးခှနျးလေးတှပေါ။ အခွခေံမှ စပွီး ရှငျးပွလိုပါတယျ။ (၁) နှာခေါငျး သို့မဟုတျ လညျခြောငျးထဲက ခြှဲသလိပျဆိုတာ ဘာလဲ?
နှာခေါငျး, လညျခြောငျး, အသကျရှူပွှနျထဲမှာ အမွဲ စိုစှတျနအေောငျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ သဘာဝ အရညျအိတျလေးတှကေ သနျ့ရှငျးတဲ့ အရညျတဈမြိုး အမွဲထုတျပေးပါတယျ။
စကျရုံ, ကား, ဆေးလိပျနဲ့ အခွားလောငျစာမှ ထှကျသော မီးခိုးငှမြေ့ား, ဖုနျမြား, အန်တရာယျမကွီးသော virus ဗိုငျးရပျဈ ပိုးမှားလေးမြားနှငျ့ အန်တရာယျရှိသော ဘကျတီးရီးယားမြားက
နှာခေါငျးမှတဆငျ့ လညျခြောငျးနှငျ့ အသကျရှူလမျးကွောငျးထဲ ဝငျရောကျလာသောအခါ ခန်ဓာကိုယျက ထုတျနကြေ အရညျကွညျကို တိုးထုတျပါတယျ။ ညဈညမျးမှုကိုဆေးကွောပေးခငျြလို့ပါ။
ကိုယျခံအားလို့ အမွဲပွောတဲ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျးက သှေးဖွူဥလေးမြားက နှာခေါငျးလညျခြောငျးထဲ ရနျသူဝငျလာတာနဲ့ စတငျတိုကျခိုကျပါတယျ။ ရနျသူဘကျက ပိုးမှားမြားရော သှေးဖွူဥမြားရော အတုံးအရုံး သဆေုံးကွပါတယျ။
နောကျဆုံးတော့ ဝငျလာတဲ့ ဖုနျ, မီးခိုးငှေ့, ပိုးမှားအသမြေား, ကဆြုံးသှားသော သှေးဖွူဥလေးမြားဟာ တိုးထုတျထားသော အရညျကွညျနဲ့ ပေါငျးစညျးပွီး ခြှဲသလိပျအနနေဲ့ ထှကျလာပါတယျ။
(၂) ခြှဲသလိပျ မထှကျအောငျ ကာကှယျဖို့က ဘာအရေးကွီးလဲ။ ။ ပတျဝနျးကငျြလထေု သနျ့ရှငျးရေးနဲ့ တဈကိုယျရေ သနျ့ရှငျးရေးပါ။ လူကွီးမြား ခြောငျးဆိုးနှာခလြှေငျ တဈရှူးနှငျ့ကာပါ။ ကလေးကို မကိုငျတှယျခငျ လကျမှနျမှနျဆေးပါ။ ကလေး ပတျဝနျးကငျြ မီးခိုးငှကေ့ငျးဝေးပါစေ။
(၃) ကလေးငယျမြား ခြှဲကပျြခဲ့သျော။ ။ ဆား လကျဖကျရညျတဈဇှနျးကို ဆူအောငျတညျထားသော ရနှေေး ၅၀၀ ml နှငျ့ရောပွီး အအေးခံပွီးလြှငျ နှာခေါငျးပေါကျမြားထဲ ၁စကျ ၂စကျစီ ၂-၃ နာရီခွားထညျ့ပေးလို့ရပါသညျ။
ရနှေေးနှေးနှငျ့ ရမေကွာခဏ ခြိုးပေးခွငျး။ ။ ကလေးငယျ အိပျသော အနီးအနားတှငျ ရနှေေးဇလုံ ခထြားခွငျးဖွငျ့ ရနှေေးငှဖွေ့ငျ့ ခြှဲပြျောနိုငျစပေါသညျ။ ဖှံ့ဖွိုးသော နိုငျငံကွီးမြားမှာ ရနှေေးငှေ့ ထုတျပေးသော စကျသေးသေးကလေးမြားကို ခြှဲကပျြသောကလေးမြားအတှကျ သုံးရနျထုတျပါသညျ။
ကလေးကွီးမြား ခြှဲကပျြခဲ့သျော ရနှေေး မကွာခဏ သောကျခွငျး, ဆားရညျနှငျ့ ပလုပျကငျြးခွငျးဖွငျ့ ခြှဲ ပြျောနိုငျစနေိုငျပါမညျ။ နှာခေါငျးပိတျ ခြှဲကပျြခွငျး ၄ ပတျကြျောလြှငျ အဖြား ၁၀၂ ထကျကွီးလြှငျ, နားပွညျယိုလြှငျ, အသကျရှူ အလှနျမွနျလြှငျ, အစာမစားလြှငျ ဆရာဝနျနှငျ့ပွပါ။
မှေးရာပါ အဆုတျလပွှေနျမြားရောဂါရှိလြှငျ ခြှဲပိတျဆိုးလှနျးသညျ။ ကိုယျအလေးခြိနျ ကသြညျ။ ကလေးအထူးကုနှငျ့ အခြိနျမီ ပွဖို့လိုသညျ။ အလှနျရှားပါသညျ။